भब्यरुपमा सिड्नीमा नेपाल महोत्सव सम्पन्न | Sima Pari
Home / Australia / भब्यरुपमा सिड्नीमा नेपाल महोत्सव सम्पन्न
सिड्नी / सिड्नीमा नेपाल फेस्टिभल भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना हुने यो महोत्सव शनिबार सिड्नीको मुख्य भाग डार्लिङ हार्बरमा आयोजना भएको थियो । गैर आवासीय नेपाली संघ अस्ट्रेलिया न्यु साउथ वेल्स राज्य समितिको संयोजनमा नेपाली दूतावास क्यानबेरा, महावाणिज्यदूतको कार्यालय न्यु साउथ वेल्स र सिड्नीका सामुदायिक संस्थाहरुको सहकार्यमा कार्यक्रम भएको हो ।
नेपाली गीत संगीत, नृत्य, खानाका परिकारहरु, हस्तकलाका सामान र नेपालीको व्यवसायबारे जानकारी आदि फोस्टिभलका मुख्य आकर्षण रहेका थिए । वर्षा र प्रतिकुल मौसमका बावजुद क्यानबेरा, मेलबर्न, ब्रिसवेन र एडिलेटबाट पनि सहभागीहरु मेलामा भेला भएका थिए । बिहान १० देखि राति ९ बजेसम्म चलेको यो महोत्सवलाई करिब २० हजार दर्शकले अवलोकन गरेको एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष महेन्द्र ओलीले बताए ।
यो वर्ष नेपाल फेस्टिभललाई भव्य बनाउन २२ वटा विभिन्न तयारी समितिहरु बनाइएका थिए । महोत्सवको प्रमुख अतिथि अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय मानव सेवा मन्त्री मेरिस पेनीले नेपाल महोत्सवमार्फत् अस्ट्रेलियामा नेपाल चिनाउन सफल भएकोमा नेपाली समुदायको प्रशंसा गरिन् । करिब एक घण्टासम्म चलेको औपचारिक कार्यक्रमलाई अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत रुद्रकुमार नेपाल, केन्द्रीय एमपी मिसेल रोलेन, सिनेटर स्याम डास्टायरी, न्यु साउथ वेल्स राज्यका विपक्षी नेता जोन रोर्वसन, महावाणिज्यदूतहरु दीपक खड्का र चन्द्र योञ्जन, गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घले, संरक्षक इन्द्रा वनले सम्बोधन गरेका थिए । संयोजक हरी राम्जालीले सहभागि सबैलाई स्वागत गरेका थिए । सचिव भुवन पाण्डे र सदस्य भरतमणि देवकोटाले न्यु साउथ वेल्स राज्य समितिले हाल सम्म गरेका गितिविधिहरु प्रस्तुत गरेका थिए । एनआरएनए अस्ट्रेलियाका सचिव भरत पोखरेलका अनुसार, महोत्सवमा एनआरएनएका आइसीसी संरक्षक, सल्लाहकारहरु पदाधिकारीहरु, विभिन्न राज्यका संयोजकहरु सहभागी भएका थिए ।
महोत्सवमा ३२ वटा स्टल राखिएको थियो । जसमा १० वटा फुड स्टल रहेका थिए । बाँकी २२ वटा स्टलहरुमा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रलाई छुट्याएको थियो । महोत्सवमा राखिएको नेपाल हाउस धेरैको आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो । नेपाललाई शो केस गर्न बनाइएको यो स्टलमा नेपाललाई चिनाउने हस्तकलाका सामानहरु, नेपालका पर्यटकीय क्षेत्र, परम्परा, रीतिरिवाज प्रदर्शन गरिएको महोत्सव संयोजक हरि राम्जालीले बताए ।
महोत्सवमा पूर्वी पहाडका राई लिम्बुदेखि तराईका राजवंशी र थारु अनि पश्चिमका रोधी र मारुनी नृत्यहरु देखाइएको थियो । नेपालबाट आएका कलाकारहरु निमा रुम्बा, अनिल सिंह, लोक गायक ऋषि देवकोटाको प्रस्तुतिले महोत्सवमा आकर्षण थपेको थियो ।
एक खुट्टाले मात्र नाच्ने क्षमता भएकी रोमा न्यौपानेले पनि नृत्य गरेकी थिइन् । सिड्नीका स्थानीय कलाकारहरुले गायन र नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । सास्कृतिक कार्यक्रमलाई भब्य बनाउन बिनोद मैनाली, भुपेन्द्र चुडाल, उषा बरिया र भिमसेन गुरुङ दिनरात खटेका थिए । साथै, सिड्नीका केही साहित्यिक सर्जकहरुलाई रचना वाचन गर्ने अवसर पनि दिइएको थियो । कार्यक्रम स्थलमा नियमित रुपमा लाखे र इन्द्र जात्रामा देखाइने गणेश (हात्ती)को नाच पनि देखाइएको थियो । नेपाल फेस्टिभलको सञ्चालन भीमसेन सापकोटा र जिना केसीले गरेका थिए । सन् २००६ देखि सुरु भएको नेपाल फेस्टिभल यो वर्ष मेलबर्न र ब्रिसबेनमा पनि हुँदै छ भने पर्थमा सम्पन्न भैसकेको छ । फोटो सौजन्य: नेपाली टच. र डि के पि
Previous: कस्तो हुंदैछ सिड्नीको नेपाल फेष्टिभल ?
Next: रमण रेग्मीको घर त लगनखेल